Kulan Cilmiyeedkii Kowaad ee Culimada Diinta Islaamka Uga Socday Magaalada Jigjiga oo Xidhmay, Bayaana ka Soo Baxay – Rasaasa News
Jun 14, 2011 Kulan cilmiyeedka oo saddex dharaarood si isdaba joog ah uga socday Jijiga ayaa saaka dhamaaday Kulanka ayaa ahaa midkii ugu horeeyey ee Abid lagu qabto degaanka Somalida Atobiya ogaden kaas oo halkud
Kulan cilmiyeedka oo saddex dharaarood si isdaba joog ah uga socday Jijiga, ayaa saaka dhamaaday. Kulanka ayaa ahaa midkii ugu horeeyey ee Abid lagu qabto degaanka Somalida Atobiya [ogaden], kaas oo halkudhagiisu ahaa NABADU WAA FURAHA NOLOSHA. Kulan cilmiyeedka waxaa ka qayb galay wufuud ay tiradoodu gaadhayso 500 oo ruux, kuwaas oo ka kala yimid dhamaan dacalada Aduunka.
Hadaba waxaa kol dhawayd na soo gaadhay Bayaanka ka soo baxay shir cilmiyeedka kowaad ee ka socda caasimada Degaanka Soomaalida Itoobiya ee Jijiga.
NABADU WAA FURAHA NOLOSHA
Jigjiga, Talaado, June 14, 2011
Waxaa maanta oo taariikhda tahay June 14, 2011 la soo gabagabeeyey Kulan cilmiyeedkii Koobaad oo ka dhaca magaalada Jigjiga, kaas oo socday mudadii u dhaxeysay June 12-14, 2011. Kulan cilmiyeedkaas wuxuu ka socday Hoolka Shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, Waxaa kale oo jiray siminaaro iyaguna ka socday masaajidda waaweyn ee dagaanka, Goobaha waxbarashada sida; Jaamacada, Machadyada, Idaacadaha,Telefishinada iyo dhamaaan sagaalka Gabal ee degaanka Soomaalida iyo Dirdhibe.
Waxaa kulan cilmiyeedka qabanqaabiyey Maxakamada Shareecada Islaamka ee Degaanka Soomaalida, waxaana xaflada furitaanka ka soo qayb galay Madaxaweynaha Dawlad Degaankaa Soomaalida, Guddoomiyaha Maxakamada Guud ee Shareecada, Guddoomiyaha Golaha Sare Islaamka, Xubno ka tirsan dawlada iyo marti sharaf kale oo badan. Waxaa kulanka goob joog ka ahaa qaybaha kale duwan ee warbaahinta Sida; Universal TV, HCTV, DDSTV iyo Radio Jigjiga FM, VOA iyo qaar ka mid ah boggaga saxaafada Internetka.
Kulan cilmiyeedkaas waxaa lagu martiqaaday in ka badan 50 culimo ah iyo aqoonyahano ka kala yimid 13 wadan oo aduunka ah oo kala ah (Somalia, USA, UK, Scandanivian, Australia, Malaysia, Qatar, Kuwait, Yemen, Suudaan, Kenya, Zambia, South Africa), kuwaas oo jeediyey in kabadan 200 oo maxaadaro, nadawo iyo fatwo.
Ka dib kolkii aan aragnay baahida diimeed, horumarineed iyo nabadgalyo; kolkii aan aragnay midhii uu dhalay heshiiskii nabadda ee UWSLF iyo Dawladda Federaalka Ethiopia waxaan soo jeedinaynaa bayaankan hoos kuqoran:
1. Inay Allaah u laabtaan lana yimaadaan toobad guud iyo mid gaar ah.
2. Inay ku dhaqmaan kitaabka Allaah iyo Sunada Rasuulka, kuna dadaalaan barashada cilmiga sharciga iyo midka adduunba.
3. Inay ilaaliyaan midnimadooda kana fogaadaan, qabyaalada, hayb sooca, dhiiga, dhaca iyo dhamaan noocyada dulmiga ah ee jira.
4. Inay ka dheeraadaan isticmaalka maandooriyaha sida qaadka iwm ee dhibaatada wayn ku haya shacabka degaanka.
5. Inay ka qayb qaataan horumarka iyo dhismaha dalka. islamarkaana ay isticmaalaan maskaxdooda iyo muruqooda kana faa,iideystaan fursadaha ay haystaan.
6. Inay ka qaybqaataan nabadgalyada iyo amniga dalka.
II. Dawlada Degaanka
1. Inay ku dadaasho Caddaalada, garsoorka iyo ilaalinta xuquuqda shacabka lana dagaalanto dulmiga iyo xadgudubka.
2. Inay ku dadaasho daryeelka qaybaha tabarta daran ee bulshada sida haweenka, caruurta, naafada, dadka la hayb sooco, dadka laga tirada badan yahay IWM.
3. Inay ku dadaasho mamul wanaaga iyo islaxisaabtanka lana ilaaliyo hantida iyo waqtiga shaqada.
III. Dadka Dagaalka wada
1. Inay nabad qaataan kuna raadiyaan wada hadal nabadeed waxkasta oo ay dalbanayaan.
2. Inay u turaan shacabka kuna dadaalaan ilaalinta xuquuqda shacabka kana fogaadaan dulmiga iyo xadgudubka.
IV. Qurba Joogta
1. Inay dib ugu soo laabtaan kana qayb qaataan dhismaha iyo horumarinta dalkooda.
2. Inay aqoonta, khibrada iyo dhaqaalaha ay haystaan galiyaan dib udhiska dalkooda.
V. Culimada Dalka
1. Inay ku dadaalaan midnimada dhaxdooda ah, iyaga oo ku midoobaya Kitaabka iyo sunada.
2. Inay dadka ka haqab tiraan barashada diinta Islaamka iyo ku dhaqankeeda.
3. Inay dadka uga digaan Afkaaraha khariban ee khilaafasan kitaabka iyo Sunada, sida; Shiicada IWM.
4. Inay Culimadu hormuud ka noqoto horumarka iyo nabadgaliyada.
Waxaa bayaankan soo saaray Culimada Mu’tamarka;
01. Sheekh Daahir Aw Cabdi
02. Sheek Yuusuf Aadan Maxamed
03. Sheekh Cabdi-raxmaan yusuf aadam (Kaaramardha)
04. Sheekh Cabdulaahi Cumar Nuur
05. Sheekh Maxamed Ibrahim Shakuul
06. Sheekh Ibrahim Maxamed Xuseen
07. Sheekh Cabdi Nuur Weerar
08. Sheekh Axmed Cabdi Samad
09. Sheekh Cabdulaahi Daahir Jaamac (Baashe)
10. Sheekh Fu,aad Xaaji Maxamud
11. Sheekh Xasan Maxamed Ibraahim (Abuu Xassaan)
12. Sheekh Maxamuud Sh Xasan (Abuu Dalxa)
13. Sheekh Cabdi-raxmaan Maxamed (CabdiMahad)
14. Sheekh Maxamed Askar Khaliif
15. Sheekh Maxamed Cabdinuur (Casoowe)
16. Sheekh Maxamed Cabdulqaadir.
17. Sheekh Mukhtaar Sh.Cabdulaahi
18. Sheekh Bashiir Maxamed
19. Sheekh Cabdi-rashiid Aabi
20. Doctor Cabdi-naasir Shuuriye
21. Doctor Axmed-haadi Maxamed Xuseen
22. Doctor Faysal Cabdi Guhaad
Waxaan u mahadcelinaynaa Madaxweynaha Dawlad Degaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar, Guddoomiyaha Maxkamada Shareecada Islaamka, Sh Muxamed Yuusuf Ismaaciil, Guddoomiyaha Golaha Sare ee Arrimaha Islaamka Sh Jaamac Cali Guuleed, Guddiga Qabanqaabada shirka iyo dhamaan ka qayb galayaasha shirka Shacabka Degaanka Soomaalida Atobiya.